မျက်ရည်မခိုင်သူတွေ လုံးဝမကြည့်သင့်တဲ့ "More Than Blue" ဇာတ်ကား - For her Myanmar
မင်မင်ဆို မျက်ရည်တွေနဲ့ နှာရည်တွေရောပြီး ပက်ပက်စက်စက်ငိုပစ်တာ
ဘယ်လိုဇာတ်ကားမျိုးတွေကို အကြိုက်ဆုံးလဲ ယောင်းတို့ရေ.. မင်မင်ကတော့ ဇာတ်ကားဆို ကြေကွဲဝမ်းနည်းပြီး ဝက်ဝက်ကွဲငိုရမှ အကောင်းဆုံးအကြိုက်ဆုံးလို့ ယူဆထားတတ်သူမျိုးပါ.. အခုယောင်းတို့ကို ဝေမျှပေးမယ့် ဇာတ်ကားလေးကလည်း မင်မင်အကြိုက်ဆုံး ဇာတ်ကားကောင်းတွေထဲကမှ ဇာတ်အိမ်ခိုင်ခိုင်နဲ့ မျက်ရည်မစဲအောင်ငိုရမယ့် More Than Blue ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားလေးပါ။
ဒီကားလေးကတော့ ၂၀၀၉ခုနှစ်ကထွက်ရှိထားတဲ့ ကိုရီးယားရုပ်ရှင် More Than Blue ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားလေးကို ပြန်လည်ဆန်းသစ်ပြီး နာမည်တူနဲ့ပဲ ပြန်လည်ထွက်ရှိလာခဲ့တာပါ။ Chinese Box Office မှာ တစ်လလောက် ထိပ်ဆုံးနေရာမှာ ရပ်တည်ထားနိုင်ခဲ့ပြီး ဝင်ငွေ ၁၅၃ မီလီယံရရှိထားတာဆိုတော့ ဒီအချက်တွေနဲ့တင် အရမ်းတွေကြည့်ချင်သွားပြီဟုတ်။
Related Article >>> နာမည်နဲ့ လိုက်အောင် ယောင်းတို့ နှလုံးသားကို ခလုတ်တိုက်သွားမယ့် Touch Your Heart
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကို ပြောပြရမယ်ဆိုရင် နာမည်မရှိတဲ့ အလွမ်းသီချင်းလေးကို အမှတ်မထင်နားထောင်မိသွားတဲ့ အဆိုတော်တစ်ယောက်က အာ့သီချင်းကိုပြန်ဆိုဖို့ သီချင်းရေးဆရာကို လိုက်ရှာရင်း ကြေကွဲဝမ်းနည်းဖွယ် အချစ်ဇာတ်လမ်းတစ်ခုကို သိရှိသွားရတာပါ…
အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ ဖခင်သေဆုံးပြီး မိခင်စွန့်ပစ်တာခံလိုက်ရတဲ့ K ဆိုတဲ့ကောင်လေးနဲ့ ကားအက်စီးဒင့်ကြောင့် မိသားစုတစ်ခုလုံးသေဆုံးပြီး တစ်ယောက်တည်းအထီးကျန်နေရတဲ့ Cream ကောင်မလေးတို့ နှစ်ဦး (၁၆)နှစ်အရွယ်မှာ အစပြုခဲ့ကြတာပါ…
အထက်တန်းကျောင်းသားအရွယ်တည်းက အဖော်မဲ့တဲ့သူတို့နှစ်ဦး တစ်ယောက်အတွက် တစ်ယောက်အပြန်အလှန် ရပ်တည်ပေးရင်း မိသားစုသဖွယ် သတ်မှတ်နေထိုင်ခဲ့ကြောင့် အချစ်မေတ္တာတွေကို ဖွင့်ဟဖို့နှောင့်နှေးနေခဲ့ကြတာပါ… Cream ဘက်က စကားလမ်းကြောင်းတွေစပေမဲ့ K ဘက်ကတော့ ကောင်မလေးကို အသိမခံချင်တဲ့ ကိစ္စတစ်ခုကြောင့် အမျိုးမျိုး တိမ်းရှောင်ရင်း နောက်ကွယ်ကနေ ပေးဆပ်ဖို့အတွက်သာ ကြိုးစားနေခဲ့ပါတယ်…
Related Article >>> လက်ရှိမှာ အအောင်မြင်ဆုံး ဖြစ်နေတဲ့ ချောက်ချားစရာ Us ဇာတ်ကား
Cream ကလည်း K အသိမခံချင်တဲ့ကိစ္စကို သိနေလျက်နဲ့ သူချစ်နေရသူ စိတ်ချမ်းသာဖို့ မသိချင်ယောင်ဆောင်ကာ အလိုက်သင့် နေနေရပေမဲ့ နောက်ကွယ်မှာ ကြိတ်မှိတ်ခံစားနေရတာတွေကို ကြေကွဲဖွယ်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်အဖြစ် အသက်သွင်းထားတာပါ.. ဇာတ်ကားကိုစီးမျောခံစားရင်း ဇာတ်လမ်းသက်သက်ပါလားဆိုတာကို မေ့ပြီး ကိုယ်တိုင်လည်း ဝင်ခံစား သူတို့ကိုလည်းသနားနဲ့ ခံစားမှုအရှိန်အဟုန်တွေ ပြင်းစေမယ့် ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားပါပဲ ယောင်းတို့ရေ…
K မသိစေချင်တဲ့ ကိစ္စကဘာလဲ .. Cream ကရော နောက်ဆုံးအချိန်ထိ ဘယ်လိုပေးဆပ်မလဲဆိုတာတွေကိုတော့ ဒီဇာတ်ကားလေးမှာ ဆက်လက်ကြည့်ရှုပေးကြပါနော်…
နောက်ထပ်လည်း ယောင်းတို့အကြိုက်နဲ့ ထပ်တူကျစေမယ့် ဇာတ်ကားကောင်းတွေအကြောင်း ဝေမျှပေးဦးမှာမို့ ဆက်လက် စောင့်မျှော်ပေးကြပါဦးလို့…
မငျမငျဆို မကျြရညျတှနေဲ့ နှာရညျတှရေောပွီး ပကျပကျစကျစကျငိုပဈတာ
ဘယျလိုဇာတျကားမြိုးတှကေို အကွိုကျဆုံးလဲ ယောငျးတို့ရေ.. မငျမငျကတော့ ဇာတျကားဆို ကွကှေဲဝမျးနညျးပွီး ဝကျဝကျကှဲငိုရမှ အကောငျးဆုံးအကွိုကျဆုံးလို့ ယူဆထားတတျသူမြိုးပါ.. အခုယောငျးတို့ကို ဝမြှေပေးမယျ့ ဇာတျကားလေးကလညျး မငျမငျအကွိုကျဆုံး ဇာတျကားကောငျးတှထေဲကမှ ဇာတျအိမျခိုငျခိုငျနဲ့ မကျြရညျမစဲအောငျငိုရမယျ့ More Than Blue ဆိုတဲ့ ဇာတျကားလေးပါ။
ဒီကားလေးကတော့ ၂၀၀၉ခုနှဈကထှကျရှိထားတဲ့ ကိုရီးယားရုပျရှငျ More Than Blue ဆိုတဲ့ဇာတျကားလေးကို ပွနျလညျဆနျးသဈပွီး နာမညျတူနဲ့ပဲ ပွနျလညျထှကျရှိလာခဲ့တာပါ။ Chinese Box Office မှာ တဈလလောကျ ထိပျဆုံးနရောမှာ ရပျတညျထားနိုငျခဲ့ပွီး ဝငျငှေ ၁၅၃ မီလီယံရရှိထားတာဆိုတော့ ဒီအခကျြတှနေဲ့တငျ အရမျးတှကွေညျ့ခငျြသှားပွီဟုတျ။
Related Article >>> နာမညျနဲ့ လိုကျအောငျ ယောငျးတို့ နှလုံးသားကို ခလုတျတိုကျသှားမယျ့ Touch Your Heart
ဇာတျလမျးအကဉျြးကို ပွောပွရမယျဆိုရငျ နာမညျမရှိတဲ့ အလှမျးသီခငျြးလေးကို အမှတျမထငျနားထောငျမိသှားတဲ့ အဆိုတျောတဈယောကျက အာ့သီခငျြးကိုပွနျဆိုဖို့ သီခငျြးရေးဆရာကို လိုကျရှာရငျး ကွကှေဲဝမျးနညျးဖှယျ အခဈြဇာတျလမျးတဈခုကို သိရှိသှားရတာပါ…
အခဈြဇာတျလမျးလေးကတော့ ဖခငျသဆေုံးပွီး မိခငျစှနျ့ပဈတာခံလိုကျရတဲ့ K ဆိုတဲ့ကောငျလေးနဲ့ ကားအကျစီးဒငျ့ကွောငျ့ မိသားစုတဈခုလုံးသဆေုံးပွီး တဈယောကျတညျးအထီးကနျြနရေတဲ့ Cream ကောငျမလေးတို့ နှဈဦး (၁၆)နှဈအရှယျမှာ အစပွုခဲ့ကွတာပါ…
အထကျတနျးကြောငျးသားအရှယျတညျးက အဖျောမဲ့တဲ့သူတို့နှဈဦး တဈယောကျအတှကျ တဈယောကျအပွနျအလှနျ ရပျတညျပေးရငျး မိသားစုသဖှယျ သတျမှတျနထေိုငျခဲ့ကွောငျ့ အခဈြမတ်ေတာတှကေို ဖှငျ့ဟဖို့နှောငျ့နှေးနခေဲ့ကွတာပါ… Cream ဘကျက စကားလမျးကွောငျးတှစေပမေဲ့ K ဘကျကတော့ ကောငျမလေးကို အသိမခံခငျြတဲ့ ကိစ်စတဈခုကွောငျ့ အမြိုးမြိုး တိမျးရှောငျရငျး နောကျကှယျကနေ ပေးဆပျဖို့အတှကျသာ ကွိုးစားနခေဲ့ပါတယျ…
Related Article >>> လကျရှိမှာ အအောငျမွငျဆုံး ဖွဈနတေဲ့ ခြောကျခြားစရာ Us ဇာတျကား
Cream ကလညျး K အသိမခံခငျြတဲ့ကိစ်စကို သိနလေကျြနဲ့ သူခဈြနရေသူ စိတျခမျြးသာဖို့ မသိခငျြယောငျဆောငျကာ အလိုကျသငျ့ နနေရေပမေဲ့ နောကျကှယျမှာ ကွိတျမှိတျခံစားနရေတာတှကေို ကွကှေဲဖှယျဇာတျလမျးတဈပုဒျအဖွဈ အသကျသှငျးထားတာပါ.. ဇာတျကားကိုစီးမြောခံစားရငျး ဇာတျလမျးသကျသကျပါလားဆိုတာကို မပွေီ့း ကိုယျတိုငျလညျး ဝငျခံစား သူတို့ကိုလညျးသနားနဲ့ ခံစားမှုအရှိနျအဟုနျတှေ ပွငျးစမေယျ့ ဇာတျကားကောငျးတဈကားပါပဲ ယောငျးတို့ရေ…
K မသိစခေငျြတဲ့ ကိစ်စကဘာလဲ .. Cream ကရော နောကျဆုံးအခြိနျထိ ဘယျလိုပေးဆပျမလဲဆိုတာတှကေိုတော့ ဒီဇာတျကားလေးမှာ ဆကျလကျကွညျ့ရှုပေးကွပါနျော…
နောကျထပျလညျး ယောငျးတို့အကွိုကျနဲ့ ထပျတူကစြမေယျ့ ဇာတျကားကောငျးတှအေကွောငျး ဝမြှေပေးဦးမှာမို့ ဆကျလကျ စောငျ့မြှျောပေးကွပါဦးလို့…
Tags: Chinese, cry, drama, more than blue, movie reviews, sad
Ei Mon April 27, 2019
ဒီတစ်ပတ်အတွင်း Joox ရဲ့ Myanmar Top Charts 100 ထိပ်ဆုံးကို ရောက်နေတဲ့ မြန်မာသီချင်း (၆)ပုဒ်
Phyu Thant April 24, 2019